Amakhasino amasha aseNingizimu Afrika kanye namaBhonasi eSelula
Ikhaya / amakhasino eselula amasha aseningizimu afrika
Amakhasino Eselula Amasha aseNingizimu Afrika
Imboni yokugembula ku-inthanethi isanda kubona ukushintsha kokugxila kumakhasino e-inthanethi kuya kumakhasino amasha eselula futhi abadlali baseNingizimu Afrika babonakala belandela lokhu, njengoba imibiko yakamuva ikhombisa ukuthi abasebenzisi baseNingizimu Afrika bakhetha amadivayisi ethebulethi namaselula ahlakaniphile esikhundleni sekhompyutha yedeskithophu neye-laptop uma kuziwa emidlalweni yokugembula.
Lokhu akumangalisi kangako uma sibheka ukuthi i-intanethi ye-ADSL isabiza kakhulu eNingizimu Afrika, okusho ukuthi izakhamuzi zingathola isipiliyoni sokudlala ngemali ephansi uma zisebenzisa amaselula azo ukungena kumasayithi ekhasino yeselula. Ngenkathi inani lamakhasino asebenza kahle namadivayisi aphathwayo eqala ukuqaphela le makethe enkulu, sabona isidingo sokukunikeza amakhasino eselula amasha ahamba phambili eNingizimu Afrika. Dlala amageyimu owathandayo kumawebhusayithi ahamba phambili axhasa izinkokhelo ngamaRandi (ZAR) ngokukhetha ohlwini olulandelayo.
Kufika ku-R22,500 Ibhonasi
R3,000 Ibhonasi ne 100 ama-spins + 100 Izikhathi Zokudlala Mahhala Ama-No Deposit Bonus
100% Ize ifike R2,000 ne 10 ama-spins + 21 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Amakhasino Esulula aqathaniswa Namakhasino E-inthanethi
Uma umusha emidlalweni yamakhasino eselula, mhlawumbe uyazibuza ukuthi yini umehluko phakathi kwamagumbi wekhasino ye-inthanethi nekhasino yeselula. Okukhulu kunakho konke ukuthi amawebhusayithi eselula akuvumela inkululeko yokufinyelela amakhasino nomaphi emhlabeni, inqobo nje uma unokuxhumana okuhle kwe-inthanethi. Lokhu mhlawumbe kuyinto enkulu encomekayo ozoba nayo uma unquma ukudlala imidlalo yakho oyithandayo ngeselula, kodwa zikhona ezinye izizathu.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi akuvamile ukuthi uthole imvume yokufinyelela kulabhulali ephelele yemidlalo uma uthatha isinqumo sokudlala ngeselula yakho, kodwa njengoba amakhasino amasha eselula enikela ngakho konke okusemandleni awo ukuhlala eyisinyathelo esisodwa ngaphambili kwamanye, abadlali beselula basengakhetha kuhlu oluhle kakhulu lwemidlalo yekhasino ebandakanya imishini yokugembula yevidiyo, imidlalo yetafula neyamakhadi ejwayelekile ebandakanya i-Roulette, i-Blackjack neBaccarat, i-Poker Yevidiyo, ama-Scratch Card nokunye okuningi.
Kulezi zinsuku amakhasino eselula ahlinzeka ukuphathwa kwe-akhawunti okugcwele, okuvumela abasebenzisi ukuba babhalise, benze amadiphozithi futhi bakhiphe imali futhi basebenzise noma yimaphi amaphromoshini, kepha imidlalo yabadayisi ababukhoma ivame ukutholakala kubadlali bedeskithophu khompyutha kuphela.
Amadivayisi Aphathwayo Asebenzayo
Ekuqaleni amakhasino eselula ayetholakala kuphela ngama-apps asebenza nge-iOS ne-Android, nakuba ayenikeza isipiliyoni sokudlala esizinzile, bekukhona abadlali abaningi abangakwazanga ukukufinyelela lokhu ngenxa yokuthi amaselula abo ayengahambelani.
Lesi yisona sizathu esenza amakhasino amasha amaningi ase-SA atholakale nganoma iyiphi idivayisi ephathwayo engakwazi ukuxhuma ku-inthanethi, kusobala ukuthi kubandakanya i-iOS namathebulethi e-Android kanye namaselula ahlakaniphile, kepha neminye imikhiqizo edumile efana ne-Windows Phone ne-Blackberry phakathi kweminye.
Lolu hlobo lwemvumelano lusebenziseka kalula kubadlali baseNingizimu Afrika, uma kubhekwa ukuthi akukho okudawunilodwayo okudingekayo, kepha bangavele bathayiphe ikheli lewebhusayithi yekhasino kusiphequluli sabo seselula bese behamba ngokuzenzakalela kuwebhusayithi yeselula.
Esikhundleni sokudawuniloda ama-app nge-App Store noma nge-Google Play Store, ungangena ngokushesha kuwebhusayithi yeselula, ubhalise emizuzwini embalwa, bese uqala ukujabulela imidlalo yekhasino usohambeni.
Amakhasino Eselula Angadingi Idiphozithi Namabhonasi
Njengoba iningi lamakhasino e-inthanethi enikeza isofthiwe yeselula esezingeni eliphakeme eyamukela abadlali baseNingizimu Afrika nezinkokhelo nge-ZAR, abadlali abavela kule ngxenye yomhlaba bangaba nomsebenzi onzima wokukhetha inkampani eyodwa noma eziningi ezihambelana nezidingo zabo, kepha lo mncintiswano owandayo ubukeka kahle kakhulu ngokombono womdlali.
Ikakhulukazi, emizamweni wokuheha amakhasimende amasha futhi ngokuwatshontshela abancintisana nabo, abaphathi bemidlalo ye-inthanethi bayaqhubeka nokwenza ngcono amaphakheji abo okwamukela amakhasimende amasha, okwenza amakhasino angadingi idiphozithi ethokozela impumelelo enkulu kulezi nsuku.
Akukho okumangazayo lapho ngoba sibona ukuthi amabhonasi ediphozi engekho abelokhu ethandwa kakhulu emphakathini wemidlalo ye-inthanethi. Lezi zinhlobo zemiklomelo azidingi umsebenzisi ukuthi enze idiphozithi ukuze athole imali yebhonasi kodwa uyithola ngokushesha lapho ejoyina ikhasino.
Futhi noma kungelula neze ukushintsha inani lebhonasi libe yimali yangempela, into enhle kakhulu ngakho ukuthi ngeke ulahlekelwe yilutho, kanti ngakolunye uhlangothi, kungaxhasa ngomfutho isabelomali sakho sokudlala.
Ukwenza Izinkokhelo Emakhasino Eselula Amasha
Amakhasino eselula asungulwe eminyakeni yamuva enze ngcono zonke izici abazinikezayo, kubandakanya ukubhenka, okungaba nomthelela omkhulu esikhwameni somdlali ngokuhamba kwesikhathi.
Lokhu kusho ukuthi abadlali baseNingizimu Afrika bangadiphozithi imali noma bayikhiphe besebenzisa izindlela zokukhokha ezithandwayo ezifana Nokudlulisa Imali Ngebhange, Amakhadi Esikweleti, Amakhadi e-Debit , Nama-e-wallets, futhi uzokujabulela ukuzwa ukuthi wonke amakhasino eselula abhalwe kuleli khasi ayakwazi ukucubungula izinkokhelo ngamaRandi, ngoba i-ZAR lisohlwini lwezimali ezisebenzayo.
Lokhu kungabukeka kuyinto engankulu kangako, kepha kuzovumela abadlali bemidlalo ukuthi benze amadiphozithi kalula nokuthi bakhiphe imali ngohlobo lwemali ekuma-akhawunti abo ebhange, ngakho-ke bagweme imali ebiza kakhulu yokushintshanisa engakhula ngemuva kwesikhathi esithile.
Uma ufuna isixazululo esihle kakhulu sokubhenka emakhasino eselula, mhlawumbe kungcono kakhulu ukuhlala usebenzisa izikhwama zikagesi ezihamba phambili ezinjenge-Neteller, i-Skrill, noma i-PayPal. Lokhu akugcini ngokugcina imininingwane yakho yangasese neyezezimali iyimfihlo ngaso sonke isikhathi kodwa kunesici sokucubungula imali ngokushesha ngezindleko eziphansi kakhulu.